दुई कम्पनीद्वारा लाभांश घोषणा, हेर्नुहोस् कुन कम्पनीको कति ? - Dainikee News::
दुई कम्पनीद्वारा लाभांश घोषणा, हेर्नुहोस् कुन कम्पनीको कति ?
काठमाडौं, पुस २९ । आइतबार २ कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् । लाभांश प्रस्ताव गर्ने कम्पनीमा सेन्ट्रल फाइनान्स र ओम डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: आइतवार, पुस २९, २०७५ /Sunday, January 13th, 2019, 12:03 pm